Wasiir Ka Tirsan DF Oo Sabab Yaab Leh U Dalbatay Baaritaan Lagu Sameeyo...
Wasiir ka tirsan DF oo sabab yaab leh u dalbatay baaritaan lagu sameeyo…
Muqdisho (Wararka Maanta) – Wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ayaa si kulul uga hadashay doorashada golaha deegaanka iyo wakiilada Somaliland ee dhacay 31-kii May, kuwaas oo shalay lasoo geba-gebeeyey shaacinta natiijooyinkooda.
Wararka Maanta : CC Shakuur: Hal-hayskii Farmaajo ee 'damac shisheeye' iyo horumarka de...
Wararka Maanta : Sanbaloolshe oo sharaxay sida Farmaajo uga shaqeeyey khilaafka ka dhex...
Wararka Maanta : Banaanbax Maalintii labaad Muqdisho ka dhigayaan Waalidiinta Caruurtooda ka...
Related Topics:baaritaanDalbatayFeaturedLagulehsababSameeyotirsanWararka MaantaWasiiryaab
Maxay yihiin xubnaha laga saaray Guddiga Doorashooyinka Qaranka
Somaliland : Xisbiga talada haya ee Kulmiye oo ka hadlay isbahaysiga…
Muqdisho (Wararka Maanta) – Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo kamid ah Midowga Musharaxiinta Mucaaridka ayaa ka hadlay dekedda Berbera oo dib u habeyn ballaaran lagu sameeyay, isagoona ku naqdiyey Farmaajo inuu kasoo horjeesto horumarka Somaliland.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay in horumarka laga sameeyay dekedda Berbera uu kal hore isku dayey inuu is hortaago madxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Farmaajo.
“Farmaajo iyo xukuumaddiisaba waxay ka hor yimaadeen ballaarinta Dekadda Berbera, iyagoo halhayskoodu ahaa waa damac shisheeye,” ayuu ku yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook.
Sidoo kale waxa uu dowladda waqtigeeda uu dhamaaday ee uu hogaanka u hayo Farmaajo ku dhaliilay in Qaadka looga soo dhoofiyo Itoobiya ku bedelato Kalluun, xili ay dowladda Itoobiya ku howlan tahay ka faa’iideysiga kheyraadkeena.
“Mowqifkeennu maalinkaa wuxuu ahaa horumarinta kaabe dhaqaale ee Soomaali leedahay in uusan dowlad Soomaaliyeed dhib ku ahayn.”
“Wasiirradii Itoobiya ayaa daahfurkii ballaarinta Dekadda Berbera u jooga, Farmaajo iyo xukuumaddiisana waxay la gole yimaadeen; qaad ayaan kalluun ku beddelannay,” ayuu ugu dambeyntii ku yiri qoraalkiisa.
Wararka Maanta : Faahfaahin kasoo baxeysa qarax miino oo Maanta ka dhacay degmada Balcad
Hadalkaan ayaa imanaya xili maanta xariga laga jaray dib u ballaarin lagu sameeyay dekedda Berbera ee Somaliland oo ay gacanta ku hayso shirkada DP World, oo ay heshiiskeeda kasoo horjeesatay dowladda federaalka.
Muqdisho (Wararka Maanta) – Qaar kamid ah odayaasha beesha Saruur oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay baaritaan laga soo saaray dilkii magaalada Gaalkacyo loogu geystay Sheekh Cali Dheere oo kamid ahaa mas’uuliyiinta samafalka ka shaqeeya ee gobolka Mudug.
Waxay sheegen in marnaba aysan fileyn qaabka shalay loo shaaciyey natiijada dilka Sheekh, ayada oo guddiga loo xilsaaray baarista dilkaas ay shaaciyeen dad ay ku sheegen inay ku cadaatay dilka Sheekh Cali Dheere, halka ay dalbadeen in mas’uuliyiin ka tirsan gobolka Mudug iyo maamulkaas sharciga lala tiigsado.
Wararka Maanta : Sawirro: PUNTLAND oo duulimaadyada caalamiga ah u fasaxday garoonka...
Odayaasha ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay arrintaas, oo ay sheegen in dad gaar ah lagu bartilmaameedsaday, islamarkaana ah gef, sida ay hadalka u dhigeen.
“Waxyaabo faro badan ayaa soo if-baxayay dhimashada Sheekha ka bacdi, waxaa xeerinayna wax badan, aamusnaantada aan aamusanahay kama turjumeyn dad aan fahmi kareyn waxa ku dhacaya laakiin waxaanu fiirineyn dhaawaca iyo xanuunka ay leedahay geerida,” ayuu yiri mid kamid ah Odayaasha la hadlay warbaahinta.
“Shir jaraa’id ayey qabteen dadna wey magacaabeen, oo shaqsiyaad ayey target-gareeyen, waxaan rabnaa in aan meesha ka cadeyno oo aan u sheegno walaalaheen anagu waxaa nahay dadka Mudug dega, waxaana ka samirnay wax aan xaq u laheyn, markaa waxaa maanta na xanuujiyanaya anaga oo Mudug degan inay walaalaheen target-gareynayaan dad shaqo u tagay.”
Odayaasha beesha Saruur ee maanta warbaahinta la hadlay ayaa sidoo kale waxay si kulul uga hadleen tabasho ay ka qabaan beesha Sacad, oo ay isku hayaan arrimo dhowr ah oo ka taagan Gaalkacyo.
Wararka Maanta : Weerar dad lagu dilay oo ka dhacay Itoobiya - Wararka Maanta: Somali...
Berbera (Wararka Maanta) – Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta xariga ka jaray mashruuc ballaaran oo dib u dhis iyo casriyeyn loogu sameeyey marsada caalamiga ah ee Berbera, taasi oo baaxaddeedii hore loogu kordhiyey 400 (Afar boqol).
Munaasibadda xarig ka jarista marsada Berbera ayaa waxaa ka qayb-galay wafuud caalami ah oo ay kamid yihiin wafdi Imaaraatiyiin ah oo uu hoggaaminayo maamulaha guud, ahna guddoomiyaha shirkadda DP World, Wafdi ballaadhan oo ka socda dalka Itoobiya oo uu hoggaaminayo wasiirka maaliyadda oo ay wehlinayso wasiirka gaadiidka iyo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida.
Sidoo kale waxaa wafdiga qeybta ka ahaa munaasibadaas kamid ahaa wafuud uu hoggaaminayo ra’iisal wasaarihii hore ee dalka Guinea Bissau, Mudane Baciro Dja, wafdi ka socda dalka Kenya, Safiirrada Somaliland u fadhiya dalalka deriska iyo Taiwan, diblumaasiyiin caalami ah.
Maxaa lagu kordhiyay;
Waxaana ay markiiba xammili kartaa 500 oo koonteynaro cabbirkoodu yahay TEU.
Waxaa lagu soo kordhiyey 8 wiish oo kuwa gashaaman ah.
Waaa lagu dhawaaqay wejigii labaad ee dekedda Berbera.
Heshiiska DP World ee dekedda Berbera ee ay la gashay Somaliland ayaa wuxuu soo bilaabmay 2016-kii, ayada oo golaha wakiiladda Somaliland ay ansixiyeen 9-kii bishii Agoosto ee isla sanadkaas, taasi oo is-qab-qabsi gaaray gacan ka hadal uu ka dhacay fadhigii lagu ansixinayay ee baarlamaanka Somaliland.
Addis Ababa (Wararka Maanta) – Millateriga Ethiopia ayaa iska fogeeyay inay duqeyn cirka ah ku dileen dad shacab ah oo ku sugnaa suuq ku yaala gobolka Tigray, kuwaasi oo ay ku sheegeen inay ahaayeen dagaalyahano mucaarid ah oo lagu raad-joogay.
Wararka Maanta : Maxay DF ka tiri dib u dhaca booqashada wasiirka arrimaha dibadda Turk...
Wararka Maanta : Raysal Wasaaraha Soomaaliya oo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ugu...
Taliyaha Booliiska Soomaaliya oo Muqdisho ku qaabilay Wafdi ka socday…
Khamiis, Juun, 24, 2021 (Wararka-Maanta) – Taliyaha ciidamada Booliiska Soomaaliya Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa maanta Xafiiskiisa magaalada Muqdisho ku qaabilay wafdi ka socday Booliiska Caalamiga ah ee INTERPOL.Kulanka dhexmaray Taliyaha Booliiska Soomaaliyeed iyo xubnaha ka socday Booliiska Caalamiga ah ayaa looga hadlay sidii aay isaga kaashan lahayeen howlaha horumarinta Booliiska iyo kor u qaadista tababarada ciidamada Booliiska Soomaaliya.
Waxaa sidoo kale waxyaabaha kulanka looga hadlay ka mid ahaa wada shaqeyn heer caalami ah oo dhexmarta Booliiska Soomaaliya iyo Booliiska INTERPOL.
Wararka Maanta : Doorashadii ka dhici lahayd degaanka Soomaalida oo dib loo dhigay
Kulanka waxaa qeyb ka ahaa Agaasimaha guud ee Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadaha oo bah wadaag la ah ciidanka Booliiska, G/sare Maxamed Aadan Koofi waxaana labada dhinac aay isla meel dhigeen iney dhexmarto wada shaqeyn buuxda.
Bangiga dhexe ee Soomaaliya oo go’aan kasoo saaray lacagta kontonka dollar …
Khamiis, Juun, 24, 2021 (Wararka-Maanta) – Bangiga dhexe ee Soomaaliya ayaa maanta shaaciyay in la qaadan karo lacagta kontonka dollarka, taasoo bilihii ugu dambeeyay laga diidanaa suuqyada sarifka iyo bangiyada kuyaala Soomaaliya.Masuuliyiinta bangiga oo shir la qaatay madaxda bangiyada gaarka loo leeyahay, xawaaladaha iyo shirkaddaha bixiya adeegga lacagaha moobaylka ayaa sheegay diidmada lacagtaas, in ay ka dhalatay been abuur ku saabsan in suuqyada lasoo galiyay lacago faaliso oo ah konton dollar.
Ganacsade Soomaali ah oo lagu dilay Koonfur Afrika + Magaca – Caasimad…